Madaxweynaha Somaliland oo Hambalyada Ciida u Direy Shacabka Somaliland – Saraar Media
Home›All War›Madaxweynaha Somaliland oo Hambalyada Ciida u Direy Shacabka Somaliland
(Kullu-caam wa antum bikhayr ), ciiddan ciiddeeda kale ILAAHAY ha inagu gaadhsiiyo bed-qab, bash-bash iyo barwaaqo.
· in aynu dhinac uga soo wada jeesanno ilaalinta nabadgelyada iyo difaaca qarannimadeenna.
· in aynu ilaalinno wada-jirka iyo isku-duubnida dhexdeenna.
· in aynu is-gargaarno, isla markaana caawinno kuweena taagta daran ama tabaalaysan.
· in aynu isu caqli-celinno, wanaagga is-farno, xumahana iska reebno.
· in aynu ka wada qayb-qaadanno horumarka iyo dib-u-dhiska dalkeenna hooyo.